Home News Magaaladda Muqdisho oo Caawa Mart-galisay Hoobiyayaal Iyo Rasaas Xoogan!!
Magaaladda Muqdisho oo Caawa Mart-galisay Hoobiyayaal Iyo Rasaas Xoogan!!
Inta Badan Degmooyinka Gobolka Banaadir waxaa laga maqlayaa Daryan rasaas aan la gareeynin halka ay ka dhaceeyso iyo Hoobiyayaal Si daran-dooris ah udhacaya,waxaana la xaqiijin karin halka rasmigga ah ee lala beegsanaayo.
Bilowga bisha Ramadaan caawa xabad iyo jug xooggan uun baan maqleynayaa Muqdisho.Hoobiyayaal ayaa waxa ay ku dhaceen bartamaha caasimadda.
Cabsi ayaa noo bilaabata marka Ramadaan uu bilowdo. Dad badan amniga awgii uma suuragleysa in ay masjidyada xaadiraan